Monday December 31, 2018 - 10:35:48 in Wararka by Mogadishu Times
Inkasta oo Isticmaarku dhibaato Xoogan u geeystay Soomaalida, Haddana Qabiilka Garraha ayaa la sheegaa in Dhibaatada ugu badani soo gaartay, waxaa iyaga gooni u ahaa in dhulkoodii la dajiyay Dad kale oo aan Somali aheyn, in la isku dayay in lagu khas
Garruha laftoodu waxa ay dageen dhul Boorantu hore u degganeed, waxa ayna ka bateen Boorantii, kadibna Boorantii ayaa ku tiri: Naga guura, Laakin hogaamiyahii Garraha Sh. Bulle Xuseen, ayaa dhiig Adoontiisii Afka ugu shubay si uu Booranta u yiraa Cudur Cusub ayaa yimid, Boorantiina waa qaxday.
Dhulka Garruhu Xoog iyo Xeeladba uu ku Qabsaday ayaa Isticmaarkii waxa uu siiyay Booranta, sababta oo ah Boorantu ma aheyn Dad Diin leh , waxa la dareemayay in ey fududahay in Booranta laga dhigi karo Dad qaata Diinta Kirishtaanka ,mana aheyn Boorantu Dad hubeysan ama dagaal kala dhexeeyo Amxaarada, Halka Garraha la rumeeysnaa in 100% ey Muslim yihiin, waxa ey lahaayeen dhaqan iyo Aqoon horuumarsan, sida: Cilmiga Xiddigaha, Sixirka, Daawa dhireedka iyo Tacdaada, Waxaa Tacdaada u xisaabsanaa 4 Nin oo kala ahaa: 1) Cabdi Cumar Muuse oo loo yaqiin Abbey Umur Muddow Muuse, 2) Shiikh Cumar "Bahar” 3) Abubakar Mashere. 4) Aunabe Dur.
Qornigii 16aad illa 17aad ayaa Garra badan u soo guureen Dhinaca Juba, Waxaana Garraha ka haray Geeleeydii garre ee (Rendille= reer diid). Garrihii dhinaca Juba u soo haajiray waxa ay soo gaareen Afmadow.
Hogaamiyayaashii Garrahana qaarkood waa la qabtay, Qaar kalena waa la dilay, kuwii Ingriisku qabtay waxaa ka mid ahaa: Gababa Mahad iyo wiilkiisii Xassan Gababa iyo Cali Cabdi , kadibna Gababa Mahad waxaa uu ku xirnaa Nairobi 10 sanno iyada oo Xabsiga si xun loogu jirdilay ka hor intaan la soo deyn, waxa uuna u dhintay jug Madaxa ka soo gaartay intii uu Xabsiga ku jiray.
Weli Gumaadka Garruhu waa socdaa illa Sannadahan dambe, Waxaa la sheegaa in si xad dhaaf ah loo gumaaday oo ka daran xasuuqii Ruwanda, qiyaastiina 700.000 Ruux laga dilay, Caalamkuna uuna war ka heyn. waxaa kale oo Xabashidu abuurtay colaad Garraha iyo qabiilada deriska la ah si dhulkooda loogu wareejiyo Qabiilada dersika la ah ee aan somalida aheeyn. Mar ayaa Boqor Xayle salaase Amray ciidamadiisa in Garraha oo dhan laga barakiciyo dhulka Ethiopia oo dhan laga bilaabo October 1964 illaa December 1964, iyada oo loo aaneeynayo qeybtii ay ku lahaayeen dagaalkii Dowladii Somalia iyo Ethiopia ee 1964. Sidoo kale Madaxdii sare ee hogaaminayay Garraha ee la Goowracay waxaa ka mid ahaa Suldaan Roobow Xassan Gababa iyo Dadkii degenaa Magaalada Wachile, Magaaladiina waa la gubay. Waxaa kale oo jiraa Dagaalkii Dahabka, Deegaan cabirkiisu dhanyahay 15-50 KM oo ku yaal Barriga Moyaale ayaa laga helay keyd Dahab oo dhan 1412 Ton. waxa eyna keentay in mar kale Garrihii deegaanka la sii bara kiciyo.
Sababaha Garraha loola Dagaalamayay, Somalinimada iyo Islaanmimada ka sokoow. Garraha waxaa laga aar gudayaa gacantii ay siiyeen Axmad Gureey, Ciidamadiisa oo Garraha iyo Mariixaanku ay door weeyn ku lahaayeen .Qoraalada qaar ayaa leh Qarnigii 14aad Ciidama gaar ah oo ahaa kuwii Axmed Gurey oo Garre ah ayaa loo xilsaaray fidinta Diinta Islaamka, bacdamaa Garruhu ku hadlaan luqadda Somaliga iyo Booranta, si ey ugu fidiyaan Diinta Koofurta Ethiopia. qoraalada qaar ayaa qaba in Garraha laftoodu ey Islaameen qarnigii 14aad, waxa kale oo lagu colaadiyaa in ey diideen in ey ka gorgortamaan Diintooda Islaamka sida Rendille (reerdinle) , Gabras, Samburu iyo Borantu oo isku dhiibay Isticmaarkii Masiixiyiinta.
Hogaamiyayaashii Garraha ee Qarnigii 18 & 19 aad waxaa ka mid ahaa: Gababa Maxamed, Mahad Xusseen, Cabdille Calio, Adowa, Amiin Aadan, Diyad Ibrahim, Aadan Emoy, Hussen Shuno, Aaden Biloka, Mahad Maxamed, Shiikh Cumar Cabdi, Xassano Rago, Xassan Kulu, Xassan Gababa, Abdi Isaaq Netello, Shiikh Webo, Shiikh Cali Maxamed, Aadan Ibrahim, Cali Yeri, Cali Buke, Axamed Kiti, Shiikh Cali Cabduraxman, Cabdille Bala, iyo kuwa kale.
FG: Aw Gababa – sawirka 1aad. Suldan Xaji Xassan – Sawirka 2aad. Suldaan Robow – Sawirka 3aad. Suldaan Maxamed Gababa – Sawirka 4aad. Godkii Dahabka Garraha – Sawirka 5aad. Garraha dega Bartamaha Afrika – Sawirka 6aad.
FG: Ma ihi Taariikhyaqaan ( Garre oo dhanna 4 Qof ayaan ka aqaan,iyagiina kalama tashan qoraalkaan oo intii aan Diyaarinayay isma arag), wixii aan ka khalday ka sax, wixii ka dhimanna ku dar, Arrgtidaada xur ayaad u tahay. Aqoon yahaynka Garre iyo Guud ahaan kuwa Somalida ayaa laga sugayaa Dhameys tir.